Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay.
Daawo: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay.
Posted by Dulmane	/ September 19, 2017
Ideecada caalamiga ah ee Hiber Radio qaybteeda afka Axmaariga ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya layeelatay Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta ee Jabhada WADANIGA xoraynta Ogadenia JWXO mudane Xassan Macalim Muxumed.
Mudane Xassan Macalim ayaa ugu horaynba wax laga waydiiyay xaalada wadanka Gacanta Gumaysiga kujira ee Ogadenia, iyo guud ahaan wadanka Itoobiya, wuxuuna hogaanku sheegay in xaalada wadanka Ogadenia ay marayso meeshii ugu xumayd abid, wuxuuna mudane Xassan sheegay in shacabka ree Ogadenia ay kala goosteen abaaro, cuduro iyo colaado.
Sidoo kale mudane Xassan ayaa sheegay in guud ahaan wadanka Itoobiya ay kajiraan kacdoomo waawayn oo mudo 2 sano ah si xidhiidh ah usocda, wuxuuna hogaanku intaas kudaray inshacabka lagumaysto ee Itoobiya ay goosteen in ay kahoos baxaan gumaysiga mudada dheer dulsaaran.
Dhinaca kale Hogaanka ayaa kahadlay dagaalada nasiib darada ah ee udhaxeeya dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogadenia iyo Oromada ee dariska iyo walaalahaba ah, mudane Xassan Macalim ayaa sheegay in dagaalada socda ay hurinayso kooxda TPLF ee wadanka Gumaysata.
Sidoo kale mudane Xassan ayaa labada qoomiyadood ugu baaqay in ay joojiyaan dagaalada jaahwareerinta ah ee kooxda TPLF ay xuduuda labada qoomiyadood ka hurinayso, wuxuuna hogaanku sheegay in laga digtoonaado dabinka ay qoomiyada Tigreegu dhigayso.
Dagaalada kasocda xuduuda Soomaalida iyo Oromada ayuu hogaanku kumacneeyay qorshe fog oo kooxda TPLF ay ku cimri dheeraysanayso, wuxuuna hogaanku intaas kudaray in shacabka looga baahan yahay kadigtoonaanta dhagarta kooxda sii liciifaysa.
Ugu dambayntii mudane Xassan Macalim Hogaanka Warfaafinta JWXO ayaa labada shacab ee Soomaalida iyo Oromada ugu baaqay in loomidoobo sidii gumaysiga meesha looga saari lahaa, shucuubta lagumaystana xoriyad taam ah loogaadhsiin lahaa.